ဆေးသုံးစွဲမှု လွန်ကဲခြင်းအတွက် ရှေးဦးသူနာပြုစုနည်း - Hello Sayarwon
ဆေးသုံးစွဲမှု လွန်ကဲခြင်းအတွက် ရှေးဦးသူနာပြုစုနည်း
ဆေးသုံးစွဲမှု လွန်ကဲခြင်းကို တွေ့ပါက သင်ဘာလုပ်မလဲ။
ဆေးသုံးစွဲမှု လွန်ကဲခြင်း ဆိုတာဘာလဲ။ သူ့ရဲ့ လက္ခဏာ တွေက ဘာလဲ။ ဆေးသုံးစွဲမှု လွန်ကဲသူအား ဘာလုပ်ပေးသင့် သလဲ။ ဆောင်းပါးတွင် ဤအကြောင်းရာများနှင့် ပတ်သက် သည့် အချက်အလက်များကို ပေးသွားပါမည်။
ဆေးသုံးစွဲမှု လွန်ကဲခြင်းဆိုတာ ဘာလဲ။
သောက်ရန် ညွှန်ကြားထားသော သို့မဟုတ် အလွယ်တကူ ဝယ်၍ရသော ဆေးများ၊ စပ်ဆေးများကို မသင့်တော်သော ပမာဏ၊ အချိန် သို့မဟုတ် ညွှန်ကြားမှုဖြင့် သုံးသောအခါ ဆေးသုံးစွဲမှု လွန်ကဲခြင်းဖြစ်ပွားသည်။
ဆေးသုံးစွဲမှု လွန်ကဲခြင်း၏ လက္ခဏာများ
တစ်စုံတစ်ယောက် ဆေးလွန်သွားပါက ပြင်းထန်မှု၊ ကျန်းမာရေး အခြေအနေ၊ လွန်သွားသော ဆေးအမျိုးအစား အပေါ်မူတည်ပြီး ရောဂါလက္ခဏာ အမျိုးမျိုးပြနိုင်သည်။ ထို့အပြင် လူတစ်ယောက်၏ ခန္ဓါကိုယ်နှင့် ဖြစ်စဉ်အပေါ် မူတည်ပြီး တုံ့ပြန်ပုံချင်း တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး မတူညီပါ။
ယေဘုယျအားဖြင့် ဆေးသုံးစွဲမှု လွန်ကဲခြင်း၏ လက္ခဏာ များမှာ မူးဝေခြင်း၊ ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ခြင်း၊ စိတ်ရှုပ်ထွေး ခြင်း၊ အော့အန်ခြင်း၊ တက်ခြင်း၊ အသက်ရှူခက်ခြင်း (သို့မဟုတ် အသက်ရှူရပ်ခြင်း)၊ မအီမသာဖြစ်ခြင်း၊ ငိုက်မျဉ်းခြင်း၊ အတွင်းပိုင်း သွေးထွက်ခြင်း၊ ဗိုက်အောင့်ခြင်း၊ အမြင်အာရုံ ပျက်ပြားခြင်း၊ သတိမေ့မြောခြင်း၊ ဟောက်ခြင်း၊ ဝမ်းလျှောခြင်း အစရှိသည်တို့ ဖြစ်သည်။
ဆေးသုံးစွဲမှု လွန်ကဲခြင်းကို ဖြစ်စေသော အကြောင်းရင်းများ
ဆေးသုံးစွဲမှု လွန်ကဲခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သော အဓိက အကြောင်းရင်းနှစ်ခု ရှိသည်။
မတော်တဆ သုံးမိခြင်း။ လူတစ်ယောက်သည် ဆေးအမျိုး အစားမှားပြီး သောက်မိခြင်း သို့မဟုတ် ဆိုးကျိုးများကို မသိဘဲ ဆေးများကို အချိန်မှား၊ ပမာဏမှားပြီး သောက်မိခြင်း၊ မမှန်ကန် စွာ တွဲဖက်ပြီး သောက်မိခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။
ဆေးများ၊ စပ်ဆေးများကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိစွာ အလွဲသုံးစား လုပ်ခြင်း။ လူတစ်ယောက်သည် မူးယစ်စေရန်၊ ဘဝ၏ ပြဿနာ များမှ လွတ်မြောက်ရန် သို့မဟုတ် မိမိကိုယ်ကို အန္တရာယ်ဖြစ် စေရန် ဆေးသောက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဆေးသုံးစွဲမှု လွန်ကဲခြင်းအတွက် ရှေးဦးသူနာ ပြုစုနည်း
ဆေးသုံးစွဲမှု လွန်ကဲခြင်းကို တွေ့ရှိပါက အောက်ပါအဆင့် များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါ။
လူနာသည် သတိလစ်နေပြီး အသက်ရှူနေသေးပါက ပြန်လည်သက်သာနိုင်သော ပုံစံဖြစ်သည့် ဘေးတစ် စောင်းဖြင့် ထားပါ။ အသက်ရှူ လမ်းကြောင်း ပွင့်နေအောင် ခေါင်းကို နောက်လှန်ပြီး မေးစေ့ကို မ ထားပါ။ အကူအညီရောက်မလာမချင်း အသက်ရှူခြင်း ကို ဆက်တိုက်စောင့်ကြည့်နေပါ။
လူနာကို အော့အန်အောင် မလုပ်ပါနှင့်။
သောက်စရာ သို့မဟုတ် စားစရာ တစ်ခုခု မပေးပါနှင့်။
သူတို့ ဆေးလွန်သွားသော ဆေး သို့မဟုတ် ဆေးဘူး ကို သင်နှင့်အတူ ဆေးရုံသို့ ယူသွားပါ။
လူနာသည် အဆင်ပြေပုံပေါ်ပြီး သတိပြန်ရလာပါက တစ်ဦးတည်း မထားခဲ့ပါနှင့်။ နောက်ထပ် ဆိုးကျိုးများ မဖြစ်အောင် အနီးဆုံးဆေးရုံသို့ လိုက်ပို့ပေးပါ။
Drug overdose. https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/healthyliving/drug-overdose Accessed March 24, 2017
What to Do When Someone Overdoses on Drugs. http://www.menshealth.com/health/what-to-do-when-someone-overdoses-on-drugs Accessed March 24, 2017
Drug Overdose Treatment.http://www.webmd.com/first-aid/drug-overdose-treatment Accessed March 24, 2017
ဘေးအန္တရာယ် တစ်ခုခုနဲ့ ကြုံခဲ့ရင်